Mamnuucida booqashada hoyga dadka waayeelka ah waxay istaagaysaa 1 Oktoobar
Dawladu waxay go’aamisay in mamnuucidii booqashada ee hoyga dadka waayeelka ee dalka ay istaagto laga bilaabo 1 Oktoobar.
Hawshan kuwa ku shaqo leh ayaa mas’uul ka ah in booqashadu u dhacdo qaab amaan ah. Hey’adda arrimaha caafimaadka waxay soo saari doontaa talooyin kuwaas oo taageero u noqonaya booqasahooyinka. Kuwaasi waxaa ku jiri doonaa tilmaamaha dhanka nidaamyada booqashada, iyadoo xooga la saarayo kala durugsanaanta masaafo ahaan iyo nadaafada.
Haddii faafida cudurka ay meel maxali ah ku korodho waxay Hey’adda caafimaadka bulshada eegi doontaa fursadaha ah in la soo saaro xadaynyo maxali ah iyo inay dhici karto in lagu taliyo in aan la booqan.
Ilaa iyo inta ka horeysa, inta mamnuucida booqashada weli ansax tahay, waa suurtagal in la iska qaleeyo mamnuucidan haddii ay jiraan xaalado gaar ah. La xiriir degmadaada ama cidda hawsha mas’uulka ka ah ee arrinta ay hoygu khuseyso si aad u ogaatid waxa ansaxa ah.
Warbixin dheeraad ah oo ka timi Hey’adda arrimaha caafimaadka kuna saabsan joojinta mamnuucidii booqashada (boggan wuxuu ku qoranyahay Iswiidhish)
Warbixin dheeraad ah oo ka timi Maamulka arrimaha bulshada (boggan wuxuu ku qoranyahay Iswiidhish)
Warbixin dheeraad ah oo ku qoran dawlada bogeeda intarnatka (boggan wuxuu ku qoranyahay Iswiidhish)
Wasaaradda arrimaha dibadda waxay ciribtirtay talo soo jeedintii xiriirka la lahayd socdaallada Dalka Ingriisiga
Wasaaradda arrimaha dibadda waxay ciribtirtay talo soo jeedintii xiriirka la lahayd socdaallada aan muhimka ahayn ee Dalka Ingriisiga. Kaasoo hirgeli doono laga bilaabo 14 setembar.
Go´aanka waxaa u sabab ah in Dowladda Ingriisiga ay aaminsan tahay in dalka Iswiidan u ka tirsan yahay dalalka halista cudurka (Covid-19) ay hooseeyso. Taasoo macneheeda ay tahay in socdaaleyaasha dalka Iswiidan aynan khuseeynin nidaamka karantiinka.
Wasaaradda arrimaha dibadda waxay xilliyadii ugu dambeeyeen ciribtirtay talo soo jeedintii xiriirka la lahayd socdaallada aan muhimka ahayn ee Yurub. Laakiinse macnaha ma ahan in xaaladda ay sidii berri hore ku soo laabatay. Waxaa dhici karto in la hirgeliyo xeerar maxali ah, xaddidoyaal iyo shuruudaha karantiinka, kuwaasoo saamayn ku yeelan karaan socdaaleyaasha dalka Iswiidan.
Iyadoo fiirogaar aan la siin halka qofku u socdaal ku tegi doono, ayaa mar kasta mas´uuliyadda waxay saaran tahay socdaalaha. Socdaale kasta waa in socdaalka kahor si fiican isugu diyaariyaa, sida aad raadsato warbixin ku saabsan xeerarka maxaliga ka hirgaleen, iyo inaad tixgeliso talo soo jeedinta iyo dardaaranka dowladaha maxaliga.
Wasaaradda arrimaha dibadda waxay ciribtirtay talo soo jeedintii xiriirka la lahayd socdaalada Dalka Qubrus
Wasaaradda arrimaha dibadda waxay ciribtirtay talo soo jeedintii xiriirka la lahayd socdaalada aan muhimka ahayn ee Dalka Qubrus, kaasoo hirgeli doono laga bilaabo 10 setembar. Go´aanka waxaa u sabab ah in Dalka Qubrus ay xayiraadda ka qaaday socdaaleyaasha dalka Iswiidan ee berri hore socdaalo dalkooda ku tegi jiray.
Socdaaleyaasha dalka Iswiidan ma khuseeyo nidaamka karantiinka, waa haddii socdaalaha u haysto caddaynta waxkamajiraanka shaybaarka cudurka (Covid-19).
Ku saabsan dalalka ee Midowga Yurub, Is-bahaysiga dalalka Midowga Yurub, Norway, Iceland iyo Liechtenstein iyo Goobaha (Schengen) iyo Ingriisiga waxaa weli socdaaleyaasha lagula talinayaa in aynan ku dhaqaaqin socdaal aan muhim ahayn ilaa 23 setembar 2020.
Culeys weyn oo xagga baaritaanka ah ayaa saaran dhawr gobal
Waa ay korortay daneynta ku aaddan baaritaanka infekshinka covid-19 oo markaas taagan. Waxay taasi keentay in waqtiga sugitaanku goballo badan kordhay, tusaale ahaan Kronoberg, Sörmland, Dalarna iyo Gobalka Skåne.
Laamaha caafimaadku waxay ka shaqeeyaan sidii ay u kordhin lahaayeen qaabka, una gaabin lahaayeen waqtiga sugitaanka baaritaanka iyo jawaabta baaritaanka.
Haddii aad leedihid calaamad cudur waxaa laguugula talinayaa in aad is baartid. Taasi xitaa wey khuseysaa carruurta dhigata fasalka dugsiga xannaannada. Gobal kasta iminka baaritaan ku sameeyo carruurta sii yar-yar.
Si aad wax dheeraad ah uga ogaatid baaritaannada leeska qaadayo, la xiriir gobalkaaga ama Hagaha caafimaadka ee 1177.
Akhriso wax dheeraad ah oo ku aadda calaamadaha caadiga ah ee covid-19
Akhriso wax dheeraad oo ku aaddan baaritaannada covid-19
Carruurta iyo dhallinyarada leh calaamadaha covid-19 waxaa lagu talinayaa in la baaro
Carruurta iyo dhallinyarada leh calaamadaha cudurka covid-19 waxaa lagu talinayaa in lagu sameeyo baaritaanka loogu yeero PCR, si ay si degdeg ah ugu laaban karaan iskoolka.
Hey’adda caafimaadka bulshadu waxay soo saartay hage goballada ka taageeraya shaqadooda ku aaddan muujinta infekshinka covid-19 ee haya carruurta iyo dhallinyarada. Waxay Hey’adda caafimaadka carruurtu ku talineysaa in la baaro carruurta dhigata fasalka dugsiga xannaanada, fasalka 1-9 ama ku jira da’da dugsiga sare haddii ay leeyihiin calaamado cudur oo u ekaan kara covid-19. Sidaas ayey carruurtu si degdeg ah ugu laaban kartaa iskoolka haddii jawaabtu ay sheegto in aysan cudurka qabin, ayna xaaladdooda kale ay guud ahaan suurta gelineyso.
– Carruurta iyo dhallinyaradu waxay wacnaan ku dareemaan in ay dhigtaan iskool iyo hawlo maalmeed kale, taasina waa sabab muhiim ah oo keeneysa in baaritaan lagu sameeyo kooxda da’dan ah. Waxaa horay kooxdan lagula taliyay in ay guriga joogaan haddii ay leeyihiin haba yaraatee calaamado cudur. Baaritaanka haddii lagu la sameeyo waxay in ka badan intii hore dib ugu laaban karaan iskoolkooda xitaa haddii ay ku hareen calaamado cudur oo yar-yar, oo aan laga helin cudurka, ayey leedahay Karin Tegmark Wisell, madax qeybeed ka tirsan Hey’adda caafimaadka bulshada.
Ku saabsan iska tallaalida cudurka waa in waayeellada iyo kooxaha cudurka u halista u yahay mudnaanta koowaad la siiyaa
Markii tallaalka looga hortago cudurka [Covid-19] la ansixiyo lagana helo dalka Iswiidan waa in ku saabsan iska tallaalida cudurka waa in dadyowga da´dooda 70 sano jir ah ama ka waawayn, kooxaha cudurka u halista u yahay kale iyo shaqaalaha xarumaha daryeel-caafimaadeedka iyo xannaanadda waa in mudnaanta koowaad la siiyaa. Hay`adda arrimaha caafimaadka dadwaynaha [Folkhälsomyndigheten] u gudbisay dowladda oo ku saabsan qorshaha qarmeed ee xiriirka la leh tallaalka looga hortago cudurka [Covid-19].
Ku saabsan shaqaalaha xarumaha daryeel-caafimaadeedka iyo xannaanadda, waxay ka kooban yihiin kuwa ka hawlgallada goobaha waayeellada lagu daryeelo, daryeelka caafimaadka/bukaanka iyo shaqaalaha daryeelo dadyowga halis ugu jira in hab halis ah ugu xannuunsadaan cudurka [Covid-19].
Tani waa qayb wargelinta kamid ah, waxaana Hay`adda arrimaha caafimaadka dadwaynaha [Folkhälsomyndigheten] laga soo xigsaday in wixii ku saabsan nooca tallaalka iyo nooca badbaadada tallaalka laga heli karo goor dambe la qiimayn doono. Tan kale weli lama hayo warbixin ku saabsan goorta dalka Iswiidan laga heli doono tallaal waxtarkiisa la ansixiyay.
Qorshaha qarmeed ee xiriirka la leh tallaalka looga hortago cudurka [Covid-19] waxaa wadajir u diyaariyay Hay`adda arrimaha caafimaadka dadwaynaha [Folkhälsomyndigheten], Golaha barwaaqosoonka iyo caafimaadka ee qaranka [Socialstyrelsen], Hay´adda difaaca rayidka iyo diyaarsanaanta [Myndigheten för samhällsskydd och beredskap], Maamullada dowladaha hoose iyo gobollada Dalka Iswiidan [Sveriges Kommuner och Regioner], Isku-duweha qaranka ee arrimaha tallaalka cudurka [Covid-19] iyo Dhakhtarka arrimaha kormeerida cudurrada faafa [Smittskyddsläkare] iyo wakiilada gobollada.
Muddada mamnuucidda soo-gelida dalka Iswiidan ee kummeelgaarka ahayd oo la kordhiyay
Dowladda waxay go´aamisay in la kordhiyo muddada mamnuucidda soo-gelida dalka Iswiidan ee kummeelgaarka ahayd. Dalalka ay mamnuucidda khuseeyso waa kuwa ku yaalaan dibada dalalka Midowga Yurub iyo Is-bahaysiga dalalka Midowga Yurub, Norway, Iceland iyo Liechtenstein [EES], taasoo lagu kordhiyay ilaa 31 oktoobar 2020.
Ulajeedada mamnuucidda laga leeyahay ayaa waxay tahay, in hoos loo dhigo heerka faafinta fayruuska [Corona], wuxuuna khuseeya dalalka aan ka tirsanayn Midowga Yurub, Ingriisiga, Norway, Iceland, Liechtenstein iyo Switzerland.
Warbixin dheeraad oo ku saabsan mamnuucidda ka aqriso
Wasaaradda arrimaha dibaddu waxay meesha ka saartay kala talinti u safridda Bulgaariya, Holland iyo Romaaniya
Wasaaradda arrimaha dibaddu waxay meesha ka saartay kala talinti u safridda aan lagama maarmaanka ahayn ee Bulgaariya, Holland iyo Romaaniya. Taasi waxay billaabaneysaa laga billaabo 27 Agoosto 2020.
Dhanka dalalka kale ee ka mid ah Midowga Yurub, EES (Iskaashiga dhaqaalaha ee Yurub) iyo aagga Schengen iyo United Kingdom waa la dheereeyay talada ah in aan lagu tagin safaro aan lagama maarmaan ah ilaa iyo oo ay ku jirto 9 Sebteembar 2020.
Isla mar ahaantaas waxaa, ilaa iyo 15 Nofeembar 2020, dadka lagala talinayaa u safridda waddamada ka baxsan Midowga Yurub, EES iyo aagga Schengen iyo United Kingdom.
Imminka waxaa albaabada loo furay codsiyada gunnooyinka loogu talagalay kooxaha cudurka u halista u yahay
Khasnadda caymiska bulshada [Försäkringskassan] waxay maanta albaabada u furtay fursadaha codsiyada gunnooyinka loogu talagalay dadyowga shaqooyinkooda ka fadhiisteen maadaama ay ka tirsan yihiin kooxaha cudurka [Covid-19] u halista u yahay. Qofku wuxuu codsan karaa in xisaabinta gunnada looga soo bilaabo 1 luulyo ilaa 30 setembar.
Gunnada waxaa laga codsada barta internetka ee Khasnadda caymiska bulshada. Codsadeha waa in warqadda caddaynta dhakhtarka ku xaqiijiya in uu ka tirsan yahay mid kamid ah kooxaha cudurka [Covid-19] u halista u yahay oona u xaq u leeyahay qaadashada gunnada.
Sidoo kale qofka shaqo haysto ama iskiisa u shaqaysto/ganacsade ah, kaasoo isagoo gurigiisa ku sugan aan shaqaysan karin, wuxuu haysta fursadda gunnada lagu codsado. Shuruudaha waxaa kamid ah in shirkadda uu shaqeeyo aynan siin karo hawlgallo kale ama siyaabo kale loola qabsin karin xaaladda shaqada taasoo looga hortegi karo faafinta fayruuska.
Warbixin dheeraad oo arrintaas ku saabsan waxaad ka aqrisan kartaa barta internetka ee Khasnadda caymiska bulshada (warbixinta af-iswiidish ayay ku qoran tahay)
Qiilka ku aaddan xeerka 50-ka qof waa la baarayaa
Xukuumaddu waxay baareysaa khafiifinta xeerka mamnuucaya isu imaatinka iyo kulamada guud ee ay isugu imaanayaan in ka badan 50 qofood. Xadka ku aaddan in ugu badnaan 50 qof ay isu imaan karaan waa xeer muhiim ah oo sii jirayaa.
Waxyaabaha laga yaabo in qiil loo dayo waxay taabanayaan laba aag.
Mid ka mid ah kuwaas waa meelaha leesugu adeego, tusaale ahaan biibitooyinka iyo maqaayadaha leh muusiko toos ah. Halkaas oo ay suurta gal tahay in lagu qabto xaflado muusiko ama bandhigyo.
Hindisaha kale wuxuu ku saabsanyahay isu diyaarinta u qiil dayidda munaasabadaha qaarkood si loogu oggolaado dadweyne fadhiisanaya. Waxay taasi khuseysaa tusaale ahaan isboortiga iyo xaflado nooc walba leh.
Hindisuhu wuxuu abaabulayaasha u dhigayaa shardi ah in ay qaadaan tallaabooyin ku aaddan in dadweynuhu ay masaafo isu jirsan karaan si xafladdu ay ugu dhacdo si aamin ah marka laga eego dhanka faafitaanka cudurka.
Hindisaha waxaa tusaale ahaan loo gudbinayaa Hey’adda caafimaadka carruurta.
Dalka Iswiidan wuxuu heshiis ku saabsan iska tallaalida cudurka loo yaqaanno [Covid-19] la galay Midowga Yurub
Dalka Iswiidan wuxuu ka qaybgeli doonaa heshiis ka dhaxeeyo Golaha Midowga Yurub iyo shirkadda Astra Zeneca, kaasoo ku saabsan iibsashada tallaalida cudurka loo yaqaanno [Covid-19]. Waa go´aan ay dowladda gaartay.
Heshiiska dhexmaray Golaha Midowga Yurub iyo shirkadda dawooyinka soo saarta Astra Zeneca, oo ah shirkad dalka Iswiidan iyo dalka Ingriisiga wadajir u leeyihiin. Tirada qiyaasta tallaalka isku-darkii waa 300 malyuun. Shir jaraaíd oo ay dowladda maalintii khamiista gelinka dambe qabatay, waxay shaacisay in heshiiska u hirgeli doono kaddib markii tallaalka la ansixiyo waxtarkiisa.
Heshiiska waxaa ku xusan in dal kasta la siin doono tiro qiyaas oo waafaqsan tirada shicibka dalkaas ku nool. Ku saabasan dalka Iswiidan waxaa loo qondheeyay qiyaastii 6 malyuun oo qiyaas ah. Islamar ayaa dalalka la siin doonaa tallaalyada loo qondheeyay.
Hay`adda arrimaha caafimaadka dadwaynaha [Folkhälsomyndigheten] ayaa go´aan ka gaari doonto kala mudnaan-siinta kooxaha shicibka ee cudurka laga tallaali doono. Markii taariikhda ay ku beegan tahay 31 agoosto ayay hay´adda soo bandhigi doontaa qorshaha qarmeed ee tallaalka xiriirka la leh.
Mamnuucida booqashada hoyga dadka waayeelka ah waa la dheereeyay
Dawladu waxay go’aamisay in la dheereeyo mamnuucida booqashada ee hoyga dadka waayeelka ah ilaa iyo 30-ka Sebtembar.
Dawladu waxaa kale oo ay Hey’adda arimaha caafimaadka iyo Maamulka arimaha bulshada u hawl saartay inay eegeen haddii mamnuucida booqashada ee ku meel gaarka ahi ay sii socon doonto inay ansax ahaato wixii ka dambeeya 30-ka Sebtembar.
– In la ilaaliyo dadka waayeelka ah waxay tahay siina ahaan doontaa arin ay ahmiyad siinayso dawladu. Isla markaas waxaa muhiim ah in xadeynyaha xaalada dadka waayeelka ah ay la jaan qaado marka la eego dhanka sida cudurka faafay ee korona u socdo iyo sida faafida cudur u eegtahay heer bulsho, sidaas waxaa sheegtay wasiirada arimaha bulshada Lena Hallengren.
Haddii labadan hey’ad dawladeed ay u arkaan in mamnuucida ku meel gaarka ah ay joogsan karto wixii ka dambeeya 30-ka Sebtembar markaas iyaga ayaa soo bandhigi doona talaabooyinka joojin kara in cudurkan ku faafo hoyga dadka waayeelka ah.
Macluumaad urursan looguna talogalay adigaaga ka weyn 70 sano ama ka mid ah dadka khatarta ku jira.
Hey’adda waddooyinka: Safar keliya haddii ay khasab tahay – ka fogaw safarka marka gaadiidku wada degdegsanyahay
Fasaxa shaqada iyo fasaxa xagaaga ka dib wey kordhayaan khataraha ciriiriga gaadiidka dadweynaha iyo jaamka gaadiidka labaduba. Shirki jaraa’id ee Hey’adaha dowladda ee Khamiistii ayey sidaas darteed Hey’adda waddooyinku ku xasuusisay dadweynaha in ay mas’uuliyaddooda qaataan inta deyrta lagu jiro iyagoo safraya haddii lagu khasbanyahay oo keliya.
– Nidaamku si fiican ayuu u shaqeynayaa, laakin waxaa qof walba looga baahan karaa caawimaad si aan u suurta gelinno safar aamin ah marka bulshadu si dhab ah isugu dhex yaaceyso fasaxa shaqada iyo fasaxa xagaaga ka dib. In beddel ahaan dhammaan gawaari la soo qaato maaha sidoo kale xal, maxaa yeelay waxay taasi waddooyinka ku keeni kartaa jaam xagga gaadiidka ah oo xannibaya safarrada lagama maarmaanka ah iyo gaadiidka wax daabula, ayuu yiri Roberto Maiorana, madaxa hawlaha aagga gaadiidka oo mas’uul ka ah qorsheynta socodka gaadiidka iyo hagiddiisa.
Wax dheeraad ah oo ku aaddan safarrada gudaha ka akhriso.
Isbadalada dhanka talooyinka in aan la safrin
12ki Agoosto ka dib meesha waa laga saaray kala talinti ku aaddaneyd u safridda Lijshenstayn iyo Osteriya.
Xilli hore waxay Wasaaradda Arrimaha Dibaddu joojisay taladii ahayd in la joojiyo safarada aan lagama maarmaanka ahayn ee lagu tagayo, Andoora, Beljam, Danmarka, Faransiiska, Giriiga, Islaand, Talyaaniga, Karawaatiya, Luxemburg, Moonako, Norway, Boolan, Saan Mariino, Isbayn, Switizerland Jarmalka, Hangari iyo dawlada Fatikaanka.
Waddamada kale ee EU, EES iyo aagga Schengenka iyo Ingiriiska waxaa kala talinta safarrada aan lagama maarmaanka ahayn la dheereeyay ilaa iyo 26 Agoosto 2020.
Dhanka dalalka ka baxsan Midowga Yurub, EES iyo Shengen waxay Wasaaradda Arrimaha Dibaddu horey go’aan uga gaartay in lagu taliyo inaan lagu tegin safaro lagama maarmaan ah ilaa iyo oo ay ku jirto 31 Agoosto.
Dheeraad ku saabsan safarada dalka dibediisa iyo in la joogo dalka dibediisa
Sii wad inaad guriga ka soo shaqayso haddii fursadaa aad haysato
Hay`adda arrimaha caafimaadka dadwaynaha [Folkhälsomyndigheten] waxay talo ahaan soo jeedinaysaa, in dadka fursad u haysta in hawlaha shaqada ay qabtaan iyagoo hoygooda ku sugan, in ay sii wadaan taas xitaa xilliga xagaaga. Waa tallaabo kaalin ka geysanayso hoos u dhigidda tirada xiriirka iyo heerka ciriiriga ee gaadiidka dadwaynaha.
Covid-19 weli wuu ku faafayaa gudaha Iswiidhan. Si loo yareeyo tirada xaaladaha covid-19 waxaa muhiim ah in la sii wado in dadku kala durko oo la yareeyo tirada kulamada lala leeyahay dadka kale.
Dad badan fursad uma haystaan inay ka soo shaqeeyaan guriga, tusaale ahaan dadka ka shaqeeya qaybta adeegyada siiya dadweynaha ama dhanka xanaanada iyo daryeelka. Si iyagu ay sida ugu amaansan ay u awoodaan inay u tagaan ugana yimaadaan shaqooyinkooda waxaa muhiim ah in la isku dayo in la iska ilaaliyo ciriiriga.
Hey’adda caafimaadka bulshada waxay sidaas darteed ku telineysaa in inta ugu badan ee dad ah ee suurtagal ah ay ka soo shaqeeyaan iyagoo jooga guriga. Marka ay jirto in qof gurga ka soo shaqeeyo wakhti dheer waxaa aad muhiim u ah in shaqo-bixiyuhu ahmiyad siiyo mas’uuliyada ka saaran xaalada shaqo.
Taladani waxay shaqaynaysaa ilaa iyo inta talooyinka guud shaqaynayaan, xaalada iminka iyo ilaa iyo 31 Diisambar 2020.
Warkan ka akhri dhanka Hey’adda caafimaadka bulshada (bogan wuxuu ku qoranyahay af-Iswiidhish)
Warbixin ku socota shaqaalaha, shaqo-bixiyayaasha iyo shirkadaha
Ku saabsan safarada dalka gudihiisa iyo gaadiidka dadweynaha
Warbixin ku socota adigaaga dareemaya wel-wel iyadoo ay sabab u tahay faayraska koroona
Ku saabsan iskoolada iyo xanaanada caruurta
Ka dib 29 Julaay waxaa la joojiyay taladii in la iska daayo safarada aan lagama maarmaanka ahayn ee lagu tagayo Daanmaark, Noorway, Iswisarlaand iyo Jeega.
Xilli hore waxay Wasaaradda Arrimaha Dibaddu joojisay taladii ahayd in la joojiyo safarada aan lagama maarmaanka ahayn ee lagu tagayo, Andoora, Beljam, Faransiiska, Giriiga, Islaand, Talyaaniga, Karawaatiya, Moonako, Laksamborg, Boolan, Saan Mariino, Isbayn, Jarmalka, Hangari iyo dawlada Fatikaanka.
Dhanka dalalka kale ee ka mid ah Midowgya Yurub, EES iyo aaga Shengen iyo United Kingdom waa la dheereeyay talada ah in aan lagu tagin safaro aan lagama maarmaan ah ilaa iyo oo ay ku jirto 12 Agoosto.
Dhanka dalalka ka baxsan Midowgya Yurub, EES iyo Shengen waxay Wasaaradda Arrimaha Dibaddu horey go’aan uga gaartay in lagu taliyo inaan lagu tegin safaro lagama maarmaan ah ilaa iyo oo ay ku jirto 31 Agoosto.
Wixi dheeraad ah ka akhri war saxaafadeedka Wasaaradda Arrimaha Dibaddu (bogani wuxu ku qoranyhay af-Iswiidhish)
Dalalka ay Wasaaradda Arrimaha Dibaddu ku talinayso in aan lagu tegin safar (bogani wuxu ku qoranyhay af-Iswiidhish)
Hey’adda caafimaadka bulshada, ku saabsan difaaca jirka ee ka dhanka ah covid-19
Qofki horay loo xaqiijiyay in uu ku dhacyay covid-19 aadbey u yartahay khatarta ah in uu mar kale cudurku ku dhacyo, ugu yaraan lix bilood. Saas waxaa qortay Hey’adda caafimaadka bulshada oo hageysa goballada iyo degmooyinka.
La xaqiijiyay waxaa loola jeedaa in qofka laga helay infekshin markaas haya ama mid uu qofku ka reystay, ama in qofka laga helo unugyada difaaca ee cudurka ka dhanka ah. Ka dib marka uu qofka infekshinku ku dhacyo waxay u badantahay in uu jirkiisu yeesho wax uun difaac ah xitaa haddii uusan lahayn unugyo difaac oo laga qiyaas qaadan karo, ayey Hey’adda caafimaadka bulshadu qoreysaa.
Sidan ayaan ku yareyneynaa faafitaanka cudurka:
Guriga joog haddii aad leedihid calaamadaha covid-19.
Badanaaba dhaq gacmaha.
Dadka kale masaafo u jirso.
Taxaddir lahaw marka aad booqaneysid dadka da’da ah iyo kuwa ka tirsan kooxda khatarta ku jirta.
Ka fogaw isku imaatinyada ay bulsho badan joogto.
Isbeddel ku yimid safar kala talinti dadka ee UD
Wasaaradda Arrimaha Dibaddu, UD, waxay 15 Luulyo ka dib meesha ka saareysaa kala talinti ku aaddaneyd aaditaanka Andorra, Polen iyo Jarmalka. Laakiin dhanka kale waxay UD soo celineysaa kala talinti ku aaddaneyd aaditaanka Switzarland, oo shaqeyneysa laga billaabo 15 Luulyo ilaa iyo 29 Luulyo.
UD si is daba joog ah ayey macluumaadka u cusbooneysiisaa marka laga hadlayo isbeddellada talooyinka ku aaddan safarrada ee xagaaga, si qorshaha loo fududeeyo maxaa yeelay xaaladdu si degdeg ah ayey isu beddeli kartaa covid-19 awgiis.
Waxaa horay meesha looga saaray kala talinta safarrada aan lagama maarmaanka ahayn ee lagu aadayo 14 waddan, waxaa iminka liiskaas lagu daray seddax waddan: Andorra, Polen iyo Jarmalka, laakin xagga Switzarland waa la soo celiyay kala talinti ku aaddan safarrada aan lagama maarmaanka ahayn, tusaale ahaan xagaabaxa.
Waddamada kale ee EU, EES iyo aagga Schengenka iyo Ingiriiska waxaa kala talinta safarrada aan lagama maarmaanka ahayn la dheereeyay ilaa iyo 29 Luulyo 2020.
Marka laga hadlayo waddamada kale ee ka baxsan EU, EES, Schengenka iyo Ingiriiska waa laga talinayaa in ay dadku u safraan ilaa iyo 31 Agoosto 2020.
Halkan waxaa ku jira liis waddamo ay UD ku talineyso in aan loo safrin. (Boggu waa af-Iswiidhish)
Mamnuucidda ku meel gaarka ah ee soo gelitaanka Iswiidhan oo la dheereynayo ilaa iyo 31 Agoosto
Xukumaddu waxay maanta go’aan ku gaartay in ay dheereyso mamnuucidda ku meel gaarka ah ee soo gelitaanka waddanka ilaa iyo 31 Agoosto. Isla mar ahaantaas musaafiriin badan ayey xukuumaddu xannibaadaha ka khafiifisay.
Mamnuucidda ku meel gaarka ah ee soo gelitaanka waddanku waxay billaabatay 19 Maarso, waxayna billaw ahaan shaqeyneysay 30 maalmood. Markaas ka dib waa la dheereeyay talooyin uu Guddiga Midowga Yurub bixiyay ka dib.
Xukuumaddu waxay sidoo kale go’aamisay in ay khafiifiso xannibaadaha soo gelitaanka waddanka. Horay tusaale ahaan muwaadiniinta Midowga Yurub iyo xubnaha qoysaskooda ka tirsan iyo dadka Iswiidhan sharciga ku leh waa loo oggolaa in ay Iswiidhan soo galaan, haddii ulajeeddadu ay ahayd in ay soo guryo noqdaan. Go’aanka maanta wuxuu ka dhiganyahay in meesha laga saaray shardigi ahaa in soo gelitaanka waddanka lagu xiro in ulajeeddaadu tahay in la soo guryo noqonayo. Sidaas darteed soo gelitaanka waddanka waa loo oggolyahay muwaadiniinta Midowga Yurub iyo dadka degganaashada waddanka ku leh iyadoo aan loo eegeyn ulajeeddada safarkooda. Shardiga guryo noqoshada waa laga dul qaaday sidoo kale xubnaha qoysaskooda ka tirsan.
Sidoo kale kooxaha ee waddanka soo geli kara waa la kordhiyay iyadoo dadka deggan waddamo la cayimay oo ka baxsan Midowga Yurub laga reebay mamnuucidda soo gelitaanka waddanka.
Isbeddelladu waxay dhaqan gelayaan 4 Luulyo.
Sidii hore waa ay ka fududdahay in aad dadka waqti la qaadatid haddii aad leedihid unugyada lidka ku ah covid-19
Hey’adda caafimaadka bulshadu waxay u aragtaa in dadka laga helay unugyada cudurka lidka ku ah ay si ka ballaaran sidii hore waqti ula qaadan karaan qoyska iyo saaxibbada. Taasi micno dheeri oo muhiim ah ayey u leedahay dadka ka waaweyn 70 sano iyo kooxaha khatarta ku jira.
In qofka laga helo unugyada cudurka lidka ku ah waxaa loo arkaa in ay yareyneyso khatarta ah in cudurka qofkaas la qaadsiiyo, taasoo yareyneysa in uu qofku cudurka sii gudbiyo. Qiimeyntu waxay shaqeyneysaa iyadoo uu shardigu yahay in uu qofku sii wadyo raacitaanka talooyinka guud ee hey’adaha dowladda, iska dhaafyo waxyaabaha layska reebay, raacyana xeerka jira si bulshada dhexdeeda looga yareeyo faafitaanka cudurka. Waxaa tusaale ahaan muhiim ah in la sii wado dhiqidda gacmaha, in masaafo loo jirsado dadka ka baxsan kuwa uu caadi ahaan qofku waqti la qaato iyo in uu guriga joogyo haddii uu qofku bukyo.
In qofka laga helo unugyada cudurka lidka ku ah waxay u badantahay in ay gebi ahaan ama qeyb ahaan qofka ka ilaalineyso in uu infektionku ku dhacyo ilaa iyo sanad barkiis laga billaabo maalinti uu qofku helyay natiijada baaritaankiisa. Marki ay aqoon dheeraad ah soo kororto waxaa dhici karta in aragtidan la cusbooneysiiyo.
– Waxaan iminka u aragnaa in ka helitaanka qofka ee unugyada cudurka lidka ku ah ay kor u qaadeyso fursadaha ku aaddan in uu qofku waqti la qaato gaar ahaan xigtadiisa, taasoo micno weyn ugu fadhin karta gaar ahaan dadka ka waaweyn 70 sano iyo dadka ka tirsan kooxaha khatarta ku jira. Waxay sidoo kale si ka ballaaran markii hore ula kulmi karayaan xigtada leh unugyada difaaca jirka xitaa haddii iyagu aysan kuwaas lahayn. Laakin waxaa mar walba loo baahanyahay in uu qofku qiimeyn iskiis u sameeyo isagoo ka duulaya xaalad walba goonideeda, qof ahaanna u qaadanaya mas’uuliyaddiisa, ayey leedahay Karin Tegmark Wisell, madax qeybeedka Hey’adda caafimaadka bulshada.
Si loo adeegsado natiijada baaritaanka waxaa muhiim ah in ay leeyihiin awood wax qabad oo aad u sarreysa, ayna bixinayaan natiijo baaritaan oo lagu kalsoonaan karo.
Maamulka dhexe oo arrimaha bulshada: Way yaraatay tirada dadka raadiya rugta qaabilaada deg-dega inta lagu jiro baahida cudur
Booqashooyinka rugaha deg-dega ah ee dalka si xoog leh ayay u yaraatay markii covid-19 ku faafay gudaha Iswiidhan. Maamulka dhexe oo arrimaha bulshada waxay ka digaysaa natiijooyinkan.
Intii u dhaxaysay toddobaadkii 10 iyo 14 waxay tirada booqashooyinka hoos u dhacday boqolkiiba 31 dhanka rugaha qaabilaada ee deg-dega. Waxaa ugu badnaa da’da ah 0-17 sanno iyo dadka ah 70 sanno ama ka weyn kuwaas oo booqashadoodu hoos u dhacday.
– Dadka leh calaamado khafiif ah tusaale ahaan cudurada wadnaha, kansar iyo cudurada kale ee khatarta ah ee sugaya inay raadsadaan daryeel caafimaad waxaa ku dhici kara saamayno kedis ah oo khatar leh, hoos u dhacyo awooda ama haba ugu darnaatee dhimasho, sidaas waxaa sheegtay Thea Enhörning, baaraha Maamulka dhexe oo arrimaha bulshada.
Dhanka rugaha qaabilaada deg-dega ee xanuunada maskaxiyanka ahna way yaraadeen booqashooyinku qiyaastii boqolkiiba 22 intii lagu jiray faafida cudurka koroona.
Daraasad ayaa muujisay in xitaa tirada dadka soo booqda daryeelka ilkaha ay ku dhawaad nus ahaan noqotay laga bilaabo toddobaadkii 2-10 ilaa toddobaadkii 14-16, xilligaas oo tiradu ugu hooseysay.
Wel-welka in cudur la qaado iyo rabis la’aanta in aan culeys la saarin daryeelka caafimaadka ayaa noqon karaa dhowr sababood, sidaas waxaa muujisay daraasad ay samaysay Maamulka dhexe oo arrimaha bulshada.
Si loo yareeyo saameynta faafitaanka feyruska corona ayey xukuumaddu u dheereysay mamnuucidda ku meel gaarka ah ee soo gelitaanka waddanka ilaa iyo 7 Juun.
Mamnuucidda ku meel gaarka ah ee soo gelitaanka Iswiidhan waxay billaabatay in ay dhaqan gasho 19 Maarso, seddax mar ayaana horay loo dheereeyay. Maalinti khamiista ayey xukuumaddu sheegtay in mamnuucidda soo gelitaanka waddanka la dheereeyay ilaa iyo 7 Luulyo. Go’aanka waxaa lagu gaaray talo uu soo jeediyay guddiga Midowga Yurub.
Wasaaradda arrimaha dibaddu waxay 30 Juun meesha ka saareysaa kala talinti ku aaddaneyd u safridda toban waddan
Wasaaradda arrimaha dibaddu waxay laga billaabo 30 Juun meesha ka saareysaa kala talinti u safridda toban waddan: Biljamka, Faransiiska, Giriigga, Island, Talyaaniga, Kroatia, Luxemburg, Portugal, Switzarland iyo Spain. Laakinse waddamada kale waa ay sii soconeysaa kala talintooda.
Sababta toban waddan looga qaadayo xayiraaddu, waa in ay waddamadaas dhankooda xudduudaha u fureen musaafiriinta ka yimaada Iswiidhan iyo waddamada kale ee EU. Taasi waxay yareyneysaa kalsooni darrada musaafiriinta Iswiidhishka, ayey ulajeedda wasaaradda arrimaha dibaddu.
Isla mar ahaantaa waxay wasaaraddu dooneysaa in ay hoos ka xarriiqdo in mas’uuliyad weyn ay saarantahay qofka shakhsiga ah: dadka waddamadaas u safraya waxay u baahanyihiin in ay qiimeyn ku sameeyaan in ay dhab ahaanti u baahanyihiin in ay aadaan, in ay si fiican ugu diyaar-garoobaan waddanka ay aadayaan in ay diyaar u yihiin in ay raacaan talooyinka hey’adaha dowladda ee maxalliga ah iyo tilmaamooyinka goobta. Haddii ay ka muuqdaan calaamadaha covid-19, gebi ahaanba ma safri kartid. Waddamada kala duduwan waxay kala leeyihiin hannaan kala duduwan marka la eego faafitaanka cudurka, tusaale ahaan feebaro koontaroolid, shardi ah in afka la xirto iyo xeerar ku aaddan masaafada ay dadku isu jirjirsanayaan.
Waddamada kale ee ka tirsan EU, EES iyo Schengen waxaa dadka laga talinayaa in ay aadaan ilaa iyo 15 Luulyo haddii aysan lagama maarmaan ahay. Isla mar ahaantaasna Wasaaradda arrimaha dibaddu waa ay dheereyneysaa kala talinti ku aaddaneyd u safridda waddamada ka baxsan EU, EE iyo aagga Schengen, kala talintaasna waxaa ay shaqeyneysaa ilaa iyo 31 Agoosto.
Qeyb muhiim ah oo ka mid ah farriimaha Wasaaradda arrimaha dibaddu waa in Wasaaradda ama hey’adaha dibadda ee dowladdu aysan gaadiid Iswiidhan keena u habeyn karin ciddii laga yaabo in ay ku adkaato in ay waddanka ku soo laabato xaaladda iminka lagu jiro awgeed.
Si aad wax walba oo markaas taagan loola socdo waxay Wasaaradda arrimaha dibaddu ku talineysaa in la soo degsado app-ka Wasaaradda arrimaha dibadda ee Resklar iyo in macluumaadka safarka ee safaaradaha lagala socdo boggeenna intarneetka Sweden Abroad. Boggu waa af-Iswiidhish.
Mamnuucidda booqashada meelaha dadka da’da ah lagu xannaaneeyo waa la dheereeyay
Mamnuucidda qaran ee booqashada meelaha dadka da’da ah lagu xannaaneeyo waxaa la dheereeyay ilaa iyo 31 Agoosto, ayey maalinti isniinta shir jaraa’id ku sheegtay wasiiradda arrimaha bulshada Lena Hallengren. Ulajeeddada laga leeyahay mamnuucidda booqashadu waa in la yareeyo khatarta is-qaadsiinta covid-19.
Maadaama la dheereeyay mamnuucidda booqashada waxay xukuumaddu markaa rabtaa in sidaas oo ay tahay uu hoyga dadka da’da ah helyo taageero si loo suurta geliyo in dadka da’da ah iyo xigtadoodu ay wada xiriiraan. Waxay xukuumaddu Hey’adda caafimaadka u xil saartay in ay kordhiso taageerada meelaha dadka da’da ah lagu xannaaneeyo, si loo suurta geliyo in si aamin ah loo booqdo. Waxay taasi noqon kartaa in la siiyo qalab la isku ilaaliyo, in booqashada laga dhigo dhismada dibaddeeda ama la adeegsado qalab digital ah, sida fidsanayaasha intarneetka.
Covid-19 wuxuu Iswiidhan ka soo galyay waddamo badan
Hey’adda caafimaadka bulshadu waxay khariidadeysay, isna barbar dhigtay hiddesidaha feyruska corona ee musaafiriinti soo guryo noqday. Mid ka mid ah waxyaabaha natiijooyinka laga fahmay waa in ay u badantahay in covid-19 uu Iswiidhan yimid marar kala duduwan, kana soo galyay waddamo kala duduwan.
Marka laga reebo tan la ogyahay ee ah in uu ka yimid Talyaaniga iyo Osteria waxay baaritaannadu muujinayaan in cudurku Iswiidhan uga yimid tusaale ahaan Ingiriiska, Faransiiska, Holland iyo USA.
Natiijada Hey’adda caafimaadka bulshadu, ka dib marki ay is barbar dhigtay hiddesidaha feyrusku, waa in ilaalada cudurrada faafa ee goballadu ay si weyn u baajiyeen in cudurki Talyaaniga ka yimid uu si fiican u sal dhigto Iswiidhan.
Baaritaanku wuxuu sidoo kale muujinayaa in feyruska corona uu sidoo kale la yimid musaafiriin ka kala yimid waddamo kala duduwan oo Yurub ah iyo USA horbaba dhammaadki Febraayo iyo billawgi Maarso. Waxaa ay sidaas darteed u badantahay in cudurku uu waadamadaas ku faafyay ka hor goorta la sheegay ee ugu horreysay.
Xannibaado dheeri ah oo ku aaddan bixinta oggolaasho mudaaharaad
Si loo yareeyo khatarta faafitaanka cudurka covid-19 waxay boolisku si dheeri ah u sii adkeynayaan bixinta oggolaashada bannaanbaxa. Taas waxaa keentay in waqtiyadii ugu dambeeyay dhawr jeer laga gudbay xadkii ahaa ugu badanaan 50-ka qofood.
Warsaxaafadeed ayuu boolisku ku tilmaamyay in xeerarka kala dambeyntu ay, si aafo loo joojiyo, oggolyihiin in la diido bixinta oggolaashada isu imaatinka guud ee dadweynaha. Aafada maanta taagan xeerarkaas ayey soo hoos geleysaa.
Kulamo saxaafadeed oo ku aaddan covid-19 oo intii hore ka yar inta xagaaga lagu jiro
Laga billaabo 10 Juun waxaa kulamada wadajirka ah ee hey’adaha dowladda ee ku aaddan covid-19 la qaban doonaa maalmaha talaadooyinka iyo khamiisyada.
Laga billaabo bishii Maarso waxay Hey’adda caafimaadka bulshada, Hey’adda caafimaadka iyo Hey’adda badbaadinta bulshada iyo diyaargarowgu (MSB), maalin kasta oo aan fasax ahayn qaban jireen kulamo saxaafadeed aafada covid-19 awgeed. Laga billaabo 10 Juun waxaa kulamada saxaafadda la qaban doonaa talaadooyinka iyo khamiisyada, saacadda 14.00. Kulamada saxaafadda waxaa lagu qabanayaa Iswiidhish iyo afka- dhagoolayaasha.
Talooyinka ku aaddan safarrada gudaha waa la khafiifinayo
Laga billaabo 13 Juun dadka aan calaamado cudur lahayn waa ay ku dhex safri karaan Iswiidhan dhexdeeda, ayuu leeyahay ra'iisul wasaaraha Stefan Löfven.
Si khafiifinta talooyinku ay u shaqeyso waa in la raacaa xeerarka ku aaddan in jir ahaan si sugan masaafo laysugu jirsado, taasoo iminka ka muhiimsanaaneysa sidii hore, ayey Hey’adda leedahay caafimaadka bulshadu.
– Taasi muhiim ayey jir ahaan iyo maskax ahaanba u tahay si loo helo fasax micno buuxa leh. Laakin waxaan rabaa in aan carrabka ku adkeeyo in ay sidii hore muhiim u tahay in dadka oo dhan ay raacaan talooyinka ah in uu qofku guriga joogyo haddii uu leeyahay haba yaraatee calaamado cudur, in uu gacmaha dhaqdo, in uu masaafo dadka kale u jirsado iyo in uu ciriiriga ka fogaado, ayuu leeyahay Johan Carlson, diritoorka guud ee Hey’adda caafimaadka bulshadu.
Xukuumaddu waxay xitaa carrabka ku adkeyneysaa in khatarti aysan dhammaannin iyo in Iswiidhan ay weli ku sugantahay xaalad khatar ah.
Baaritaanno lacag la’aan ah oo ku aaddan covid-19
Dhammaan dadka leh calaamadaha cudurka covid-19 waa la baari doonaa. Baaritaannadu waxay noqon doonaan kuwo lacag la’aan ah, ayey xukuumaddu leedahay. Waxaa intaas dheer in ay kordhi doonaan tirada waxa loogu yeero tijaabooyinka unugyada cudurka liddiga ku ah.
Tijaabooyinka waxaa si ballaaran loogu wada qaadi doonaa waddanka oo dhan. Xukuumadda ayaa u celin doonta kharashka dheeriga ah ee baaritaanadaas goballada uga baxaya.
Qofki leh calaamado cudur oo laga yaabo in uu yahay covid-19 waxaa loo soo jeedin doonaa in baaritaan lagu sameeyo. Taasi waxay dhici doontaa iyadoo uu qofku isagu isbaarayo, halkaas oo waxa leesku baarayo guriga loogu soo dirayo bukaanka, oo guriga baaritaanka ku sameynaya, dabadeedna dhambaal siduhu ka soo qaadesyo. Taas beddelkeeda waxaa jiri kara meelo gaari lagu geli karo oo aad gaariga intaad ku gashid isku baari kartid.
Baaritaannada ku aaddan unugyada cudurka liddiga ku ah sidoo kale waa la kordhinayaa.
– Waxaa jirta lacag loo qoondeeyay in baaritaannada noocan ah ay lacag la’aan u noqdaan shaqaalaha caafimaadka, sidoo kale shaqaalaha xagga meelaha xannaanada, dadka loo adeego, hoyga gaarka ah, kuwa guryaha u adeega iyo shaqaalaha ka shaqeeya meelaha kale ee bulshada muhiimka u ah. Ulajeeddada xukuumaddu waa in sidoo kale shacabka intiisa kale lagu casuumo tijaabooyinka unugyada cudurka liddiga ku ah, laakin iyadoo uu qofku lacag bixinayo, ayey leedahay wasiiradda arrimaha bulshada, Lena Hallengren.
Xukuumaddu waxay go’aamisay in shaqaalaha xilliyada qaar ka shaqeeya beeraha, dhir-beerista iyo nafaqeynta jardiinooyinka in lagu daro liiska dadka laga reebi karo ka mamnuucidda soo gelitaanka waddanka. Wax dheeraad ah oo ku aaddan ka mamnuucidda soo gelitaanka waddanka ka akhriso halkan.
Khad taleefan oo qaran oo ku aaddan feyruska cusub ee corona oo luqado fara badan ah
Khadka taleefanka ee gobalka Stockholm ee luqadaha badan ee ku aaddan feyruska corona wuxuu iminka noqonayaa mid qaran ayey leeyihiin Hey’adda caafimaadka bulshada iyo qoballadu.
Khadka taleefanka waxaa heegan ku ahaanaya xiriirayaal iyo warbixiyayaal xagga caafimaadka ah oo goballada jooga. Waxay ku hadli doonaan af-carabi, af-soomaali, af-Iraani, af-tigree, af-amxaari iyo af-ruush. Nambarka taleefanku waa: 08-123 680 00.
Khadku wuxuu furanyahay maalmaha caadiga ah saacadaha: 09.00-12.00 iyo 13.00-15.00. Halkan ayey dadweynuhu soo wici karaan si jawaabo ugu helaan su’aalaha ku saabsan feyruska cusub ee corona.
Khadka taleefanku uma shaqeeyo macluumaadbixiye xagga caafimaadka ah ahaan oo caawimaad loogama heli karo arrimaha bukaanka ee qofka u gaarka ah, markaas waxaa lala xiriiriayaa Hagaha caafimaadka ee 1177. Waxay ku jawaabayaan Iswiidhish iyo Ingiriis.
Haddii ay jiraan dhibaatooyinka degdeg ah oo nafta khatar gelinaya waa in la wacaa 112. Xagga su’aalaha guud ee ku aaddan feyruska cusub ee corona waxaa kaloo jira nambarka qaranka ee macluumaadka 113 13.
Bogga Krisinformation.se waxaad sidoo kale ka heleysaa macluumaad ku aaddan feyruska cusub ee corona oo luqado kale ah.
Xukuumadda: Dugsiyada sare waa la furi karaa mar kale
Ardayda dhigata dugsiyada sare waxaa dhici karta in ay xagaaga iyo deyrta u laabtaan fasalladoodi iskoolka. Isbeddelku wuxuu shaqeynayaa laga billaabo 15 Juun.
Hey’adda caafimaadka bulshadu waxay khafiifineysaa talooyinki hore oo waxay meesha ka saareysaa shardigi ahaa in distans wax lagu dhigo. Sidaas darteed laga billaabo 15 Juun hawlihii caadiga ahaa dib ayey ugu soo laabanayaan dugsiyada sare. Farriintu waxay shaqeyneysaa ilaa amar dambe.
Ardayda dugsiyada sare ee u baahan dugsiyada xagaaga waxay sidaas darteed xitaa fursad u helayaan in ay xagaaga gudihiisa iskoolka wax ku dhex dhigtaan.
Xagga waxbarashada dadka waaweyn ee Komvux-ka, Jaamacadaha xirfadaha iyo jaamacaduhu qeyb ahaan distans wax waa ku sii dhigi karaan si loo yareeyo isqaadsiinta cudurka
– Marka la eego sida ay maanta xaaladdu tahay laga billaabo 15 Juun waxay dugsiyada sare dib ugu laaban karaan in ay fasalladoodi caadiga ahaan wax ku dhigaan. Waxay taasi ka dhigantahay in aan iminka bixineyno fursad qorshe dejin oo ku aaddan xagaaga iyo xilli dugsiyeedka deyrta oo aan ogahay in ay muhiim u tahay duruufaha iskoolladu shaqadooda ku gudan karaan, ayey leedahay wasiradda waxbarashada, Anna Ekström (s).
Haddii faafitaanka cudurku uu mar kale sii kordho waxay xukuumaddu diyaar u tahay in ay tallaab qaaddo iyo in mar kale dib loogu laabto distans wax ku dhigiddi.
Tan khuseysa xafladaha waxbarashada waxba iskama beddelin, halkaas oo xafladeyn heer hoose ah diiradda la saarayo si loo yareeyo faafitaanka cudurka. Waxaan horay u faafinnay in sagxadaha ardaydu ku dabbaaldegaan ay mamnuuc yihiin, taasoo ay Hey’adda gaadiidku go’aan ka gaartay.
Xadka da’da kooxaha khatarta ku jira sidiisa ayuu sii ahaanayaa
Hey’adda caafimaadka bulshadu waxay u aragtaa in xadka da’da dadka loo arko in ay khatar ku jiraan uu sii ahaanayo 70 sano jirnimada. Saas waxaa 26 Mey shir jaraa’id ku sheegay wasiiradda arrimaha bulshada Lena Hallengren iyo diritoorka guud ee Hey’adda caafimaadka bulshada.
Hey’adda caafimaadka bulshadu waxay soo saartay talooyin gaar ah oo loogu tala galay dadka 70 sano ka waaweyn iyo dadka kale ee ka tirsan kooxda khatarta ku jirta. Aad bey muhiim u sii tahay in kooxaha khatarta jira ay intii suurta gal yareeyaan xiriirka jir ahaaneed ee la dadka kale la yeelanayaan. Isla mar ahaantaasna wuxuu diritoorka guud Johan Carlsson carrabka ku adkeeyay in xiriirrada bulshada la sii lahaado oo la yareeyo kelinimada dadka da’da ah si aan loo lumin caafimaadka iyo tayada nolosha.
Si loo sii dhawro xiriirrada bulshanimada waxaa lagu talinayaa in dhismooyinka dibaddooda lagu wada xiriiro iyadoo masaafo la isu jirsanayo. Sababtoo ah taasi aad bey u sii yareyneysaa khatarta faafitaanka cudurka. Dhibac wax isku qaadsiintu waa ay sii fududdahay marka leeskula jiro dhismo gudeheed. Mamnuucidda booqashada hoyga dadka da’da ah sideedi ayey u sii soconeysaa.
Akhriso wax dheeraad ah oo ku aaddan talooyinka ku socda dadka ka sarreeya 70 sano.
Oggolaasho isboortiga la oggolaanayo xagaaga
Isboortiga mar kale ayaa dib loo billaabayaa, laga billaabo 14 Juun – laakin waa dhismooyinka dibaddooda iyo daawadayaal la’aan.
Xukuumadda iyo Hey’adda caafimaadka bulshadu Jimcadi ayey soo gudbiyeen go’aankooda. Go’aanku wuxuu khuseeyaa wixii isboorti ah oo dhan, heer kasta oo ay yihiin, xagga ragga iyo xagga dumarka intaba. Laakin iyadoo uu shardigu yahay in dhismooyinka dibaddooda loogu qabanayo si waafaqsan xannibaadaha la xiriira kulamada guud.
Xadeynta ku aaddan ugu badnaan 50 qofood oo isugu yimaada meelaha guud iyo kulamada waxba lagama beddelin, taasoo ka dhigan ciyaaraha iyo tartamada ay khasab tahay in daawadayaal la’aan la qabto.
– Isboortigu dad badan ayuu wax badan uga dhiganyahay, gaar ahaan waqtiyada ay xaaladdu adagtahay, isbeddello waaweyna ay jiraan. Sidaas darteed waa wax wanaagsan in Hey’adda caafimaadka bulshadu ay iyadoo laga duulayo xaaladda taagan ee cudur qaadsiinta ay u aragto in la qaban karo tartamada isboortiga, xitaa haddii ay khasab tahay in ay duruufo aan caadi ahayn ku dhacaan, ayey leedahay Amanda Lind (MP) wasiiradda Isboortiga.
Uppdaterades 16 sep 2020 10:55